Mayelana NATHI - Micvd.com
Shanghai NPACK I-automation Equipment Co, Ltd ngumenzi ochwepheshe wezinhlobo ezahlukene zemishini yokufaka uketshezi nokunamathisela. Imikhiqizo yethu eyinhloko: I-NPF yochungechunge lwemishini yokugcwalisa, imishini yokugcwalisa i-piston, imishini yokugcwalisa ngokweqile, imishini yokugcwalisa amandla adonsela phansi, imishini yokugcwalisa enesisindo; Uchungechunge lwe-NPC lwemishini ejikelezayo ye-ciling, imishini yokufaka i-ciling; Uchungechunge lwe-NP kafulawa, uketshezi, imishini yokufaka ye-granular othomathikhi; nemishini yokuwasha, ohhavini, abaxukuzuku, imishini yokubopha i-aluminium foil, ama-inkjet printa, imishini yokurekhoda, amatafula ajikelezayo, amabhande okuhambisa kanye neminye imishini yokusiza. Imishini yethu isetshenziswa kabanzi kumakhemikhali ansuku zonke, izimonyo, ama-pesticides, uwoyela, ukudla, isiphuzo, ezemithi nezinye izimboni.
Sihlala sinamathela emigomeni "yokuqamba ezobuchwepheshe" kanye "nekhwalithi enhle kakhulu." Sigxila kumkhiqizo we-R&D ngenkathi siqinisekisa ubuholi bobuchwepheshe kanye nezici ezintsha. Yonke imikhiqizo yenziwa ngezinto nezinto zokwakha ezithengiwe eJalimane, e-United States, eJapan naseNingizimu Korea, ukuze kuqhutshwe futhi kuhlanganiswe onjiniyela bethu nabasebenzi. Kungukufa kobuhlakani nokusebenza kwethu. Sisebenzisa i-ISO9001: Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-2008 kanye nemikhuba yokuphatha ese-5S ekuqinisekiseni ikhwalithi yomkhiqizo ophoqelelayo nokunikezwa okunembile futhi okufika ngesikhathi. Ithimba lethu lenkonzo ngemuva kokuthengisa lilungele ukuhlinzeka ngosizo olusheshayo nolusebenzayo kumakhasimende nganoma yisiphi isikhathi.
Ngemva kweminyaka yentuthuko, sithole isipiliyoni esicebile ekupaketheni oketshezi. Kungakhathaliseki ukuthi i-ejenti noma ukhilimu, i-foam ephezulu noma imikhiqizo ebuhlungu, sizokunikeza isixazululo esinengqondo kakhulu okokuqala. Isevisi enhle kakhulu nedumela elihle lisenza sibe umphakeli ohola kule mboni. Imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-50 nezifunda, kuhlanganise neMelika, iYurophu, i-Middle East, ne-Southeast Asia, ukwamukelwa kahle amakhasimende ethu.
Ngenxa yesikweletu sethu esihle kanye nensizakalo, senze impumelelo enkulu eminyakeni edlule. Sisungule ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside namakhasimende amaningi. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezindaweni ezinjengeKorea, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japan, Denmark, Romania, Bulgaria, Russia, South Africa, Nigeria, USA, Australia, Canada, Argentina kanye I-Chile. Ngaphandle kwemishini nemishini, siphinde sinikeze imigqa yokukhiqiza. Sibheke phambili ekubambisaneni kwesikhathi eside nokuchuma namakhasimende emhlabeni jikelele.
Sizokuqinisekisa ngekhwalithi enhle kakhulu futhi esebenza kahle ngemuva kokuthengisa. NPACK KAKHULU UKHETHO lwakho